Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay saraakiil ka kala socotay Midowga Afrika iyo QM – Radio Daljir
Juunyo 26, 2018 5:21 g 0
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kula kulmay Wakiilka gaarka ah Midowga Afrika ahna Madaxa AMISOM Danjire Francisco Madeira iyo saraakiil kale oo ka tirsan UNSOM.
Kulankan oo sidoo kale ay qeyb ka ahaayeen Wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed oo uu ugu horeeyo Wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Xuseen (Eelaay) ayaa waxaa intiisa badan diirada lagu saaray ammaanka guud ee deegaanada maamulka.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa kulanka markii uu soo idlaaday hadal uu warbaahinta siiyay wuxuu ku sheegay in saraakiishan ay isku afgarteen sidii ay AMISOM ay qeyb weyn uga qaadan laheyd hawlgalada lagu dagaalamayo ururka Al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo dib u furista wadooyinka go’doonsan.
“Safarka ay noogu yimaadeen xubnahan waanu soo dhaweyneynaa, arrimaha aan ka wada hadalnay dhammaan waan isku fahanay, in amniga la sugo iyo sidii loo furi lahaa jidadka, waxaanu rajeyneynaa in waxa dhiman la dhameystiro, waxyaabo badan ayaa la qabtay.” Ayuu yiri Madaxweyne Shariif Xasan.
Amb. Francisco Madeira Wakiilka gaarka ah Midowga Afrika ayaa dhankiisa Madaxweynaha Koonfur Galbeed uga mahadceliyay qabsoomidii shirkii Golaha Amniga Qaranka ee Baydhabo, wuxuuna tilmaamay in AMISOM ay kaalin muuqata ka qaadan doonto dagaalka lagula jiro Shabaab.
Saraakiishan oo ka kala socday Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ayaa shalay waxa ay gaareen magaalada Baydhabo, iyaga oo isla shalay la kulmay xubno ka kala tirsan dowladda Ingiriiska iyo AMISOM oo ay kala hadleen arrimaha ammaanka, inta ay magaalada Baydhabo ku sugnaayeen waxay kormeereen saldhigyada ciidan iyo xarumaha uu maamulka ku shaqeeyo.
Puntland oo Ciidamo dheraad ah geysay Tukaraq (dhegayso)